Guddoomiyaha Shabeellaha hoose oo sheegay inay degan tahay Xaalada deegaanka Bariire | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddoomiyaha Shabeellaha hoose oo sheegay inay degan tahay Xaalada deegaanka Bariire
Guddoomiyaha Shabeellaha hoose oo sheegay inay degan tahay Xaalada deegaanka Bariire
Muqdisho (SONNA) Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo la hadlay Wakaalada SONNA ayaa sheegay in xaalada deegaanka Bariire ay degan tahay, isla markaana aysan jirin dagaalo ka dhacay.
Guddoomiyaha ayaa been abuur ku tilmaamay wararka sheegaya in xalay dagaal uu ka dhacay Deegaanka Bariire, isagoo sheegay in Maleeshiyada Al shabaab ay shalay tiro yar oo Madaafiic ah ku soo tuureen deegaanka, balse aysan geysan wax khasaaro ah.
Ibraahim Aadan Najax ayaa sidoo kale xusay in Maleeshiyada diidan Hormarka iyo Nolosha shacabka Soomaaliyeed ay dhawaan qarxiyeen Buundada deegaanka Bariire oo muhiim u aheyd isku socodka gobolka oo muddo aad u badan soo shaqeyneysay, wuxuuna balanqaaday inay ka shaqeyn doonaan hormarka deegaankaas, shacabkana ay ka codsanayaan inay la shaqeeyaan Ciidamada amaanka.
Tan iyo markii ay Ciidamada dowlada la wareegeen deegaanka Bariire, waxaa aad u soo hagaagaya amaanka, iyadoo shacabka ay si u soo dhaweeyeen Howlgalo ciidamada dowlada ay ka sameeyeen deegaanka Bariire iyo Nawaaxigiisa.
Previous article800 oo qof oo ku dhaawacantay rabshado ka dhashey aftidii gobolka Catalonia ee Spain
Next articleWarbixin ku saabsan Kooxda Baambeyda iyo ahaqooyinka ay qabtaan